Accueil > Gazetin'ny nosy > Antananarivo Villa Elisabeth
Antananarivo Villa Elisabeth
Firenena tsy misy tantara tsy firenena
N’inona n’inona filaza, n’iza n’iza no be lazao nefa, dia tsy mendrika ho ana firenena iray «mahaleotena» («indépendant»), manana fiandrianam-pirenena («Souveraineté nationale»), ny mivaro-barotra ny fananany izay vakoka («patrimoine») eo amin’ny lafin’ny Tantara sy Kolotsaina. Mpamadika tanindrazana ingahy Reboza Julien, tompon’andraiki-panjakana nanao sonia, sy Herilanja Gerald Ramangasoavina, filoha mpanorina izany orinasa «Madaterrain 0321» (fa tsy Madame Perrin) nahasahy «nividy» ilay tany ary neken’ilay voalohany. Taty aoriana indray dia namidiny amina olo-kafa ka tsy hita ao anaty taratasy intsony fa fananam-panjakana («Domaine de l’Etat») ilay tany namidy. Tena tokony hiditra an-tsehatra ny Bianco satria resaka masiso sy mantsina be no ao ambadik’izany raharaha izany.
23 Oktobra 1817. Io andro io no nanaovan’i Robert Townsend Farquhar, Governora anglisy ao amin’ny Nosy Maurice, sy Radama I, zanaky ny Mpanjaka Andrianampoinimerina, sonia fifanarahana voalohany anglisy-malagasy na «Premier traité britannico-malgache». Nanomboka teo dia nomena ny anarana hoe Mpanjakan’i Madagasikara i Radama I. Tsy hidiran-tsika lalina eto ireo fifanarahana, fa tsara ho tadidy ny hoe: efa tamin’izany fotoana izany dia nisy Anglisy monina teto Madagasikara. Tsy adino koa f’efa tamin’ny volana Aogositra 1818 no nigadona teto ny L.M.S. (London Missionary Society) notarihin-dry David Jones sy Thomas Bevan. Teratany anglisy ireo, mazava ho azy. Ary ny taona 1820 dia nisy Malagasy nalefa tany Londres, natao hoe masoivoho mandehandeha («ambassadeurs itinérants»).
Rehefa voazanaka ny firenena malagasy, nanomboka ny volana Aogositra 1896, dia teto foana ireo Anglisy ireo, tsy niditra mihitsy tamin’ny fomba fitantanan’ireo Frantsay ny tany sy fanjakana izay lasa fananan’i Lafrantsa tanteraka. Fa vitsy aminareo mpamaky no mahalala fa nisy anie izany hoe «Opération Ironclad» izany teto Madagasikara e! Tsy sarimihetsika mihitsy izy io fa anarana miafina ara-miaramila nilazana ny fahatongavana ireo miaramila anglisy nanafika ity «colonie française» ity tao Toamasina sy Antsiranana, teo anelanelan’ny volana May sy Novambra 1942. Tamin’izany fotoana izany mantsy dia teo ambanin’ny fahefan’i Vichy tarihin’ny Maresaly Philippe Pétain, izay niaraka tamin’ireo Alemà sy Japoney, ny governemanta frantsay (Ny Japon dia nandefa ny sambo misitrika (« sous-marins ») I-10, I-16 sy I-20, tao Antsiranana, ny 29 May 1942). Tamin’izany fotoana izany nisy ihany koa ny hoe «France Libre» (Lafrantsa afaka) notarihin’ny Jeneraly Charles de Gaulle avy ao Londres.
Izany, Tompoko, ny an’ny olona: tsy fafany mihitsy ny Tantarany, eny na dia lavitry ny Tanindrazany aza no niseho ny tranga nahakasika azy nivantana. Ny vazaha moa mahay mifanaraka foana, ka dia nijanona zanatany frantsay i Madagasikara sy ny mponina rehetra ao aminy hatreo. Ny 6 Febroary 1952 dia nodimandry ny Mpanjakan’i Angletera, George VI. Tsy nanan-janaka lahy izy fa vavy roa: Elisabeth sy Margaret. Satria moa Elisabeth no zokiny dia izy no nandimby ny rainy nanomboka io 6 Febroary 1952. Ny any moa tsy lany andro mitoritoreo fa mivantana: Maty ny Mpanjaka, ho ela velona ny Mpanjaka vavy («Le Roi est mort, vive la Reine»). Ny Talata 2 Jona 1953, tao amin’ny Abbaye ao Westminster, no andro natokana ho andro hametrahana ny satrom-boninahiny («Sacre» na «Couronnement») ka ho lasa Elisabeth II, Mpanjakavin’ny Angletera feno izy. Izany hoe 15 volana taorian’ny nahalasan’ny rainy.
Ny firenena tsy manana Tantara, tompoko, tsy firenena. Olona tsy misy fotony izany ny olona mipetraka ao aminy ka tsy handroso mihitsy fa viravirain’ny vahiny mandrakizay. Raha dinihina izany dia tsy ny vahoaka malagasy no voahozona fa mpiray tanindrazana toa ny tena no manozona ny taranaka sy zanaka amam-para. Ny any ivelany mampiditra vola ny trano nipetrahana na mbola ipetrahana olona malaza. Ny eto Madagasikara dia fananam-panjakana izao mbola misy mahita mampiasa ny fahaizany eo amin’ny lafin’ny fitiavan-tena, fitiavan-kely. 59 tapitrisa iraimbilanja na 12 tapitrisa ariary! Tsy efa lany izay? Tsy mahazo fiara 4X4 vaovao akory anie izany. Ankasomparana kosa angamba e. Fa ny vokany dia io. Naverina any amin’ny fanjakana ho fananany aloha io tany io. Inona tokoa moa ny «tombontsoa» azon’ny vahoaka malagasy amin’izany mivarotra fananana iombonana izany aloha e? Asa…
Ny andrasan’ny rehetra dia ny Filoha Hery Rajaonarimampianina mihitsy no hilaza fa manomboka izao dia tsy misy ary tsy hisy intsony eto amin’ny tanin’i Madagasikara, fananam-panjakana, indrindra fa tany sy trano azo amidy intsony. Ary dia ho raiketina ho lalàna izany ho fiarovana ny vakoka ara-tantara maha firenena ny firenena iray. Fa kosa tsy atao ho fampanantenana ao anaty propagandy 2018 an! Izao dia izao no tanterahina izany fiarovana ny fananan’ny Malagasy izany. Satria ny vahoaka anie no tena fanjakana e! Ny vahoaka anie no tena mibaiko fa ianareo mpanatanteraka mandalo fotsiny ihany e! Misaotra mialoha, tompoko.